Bitcoin कहिले किन्ने? कहिले बेच्ने? डेटा विश्लेषण र ट्रेडिगं जानकारी पढ्नुहोस् | CoinDesk Nepal
Home Price Analysis Bitcoin कहिले किन्ने? कहिले बेच्ने? डेटा विश्लेषण र ट्रेडिगं जानकारी पढ्नुहोस्
Bitcoin को मूल्य दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ; यस्तो बेला लगानीकर्ताहरुले ध्यान पुराउनुपर्छ । Bitcoin को मूल्य एकदमै अस्थिर छ, यसको मूल्य आज दोब्बर हुँदा भोलि नै ५०% तल झर्न सक्छ। नयाँ लगानीकर्ताहरुले ट्रेडिगं जानकारी लिएर डेटाको विश्लेषण गरेर मात्र आफ्नो पैसा हाल्नु पर्छ। अरुको कुरा सुनेर लगानी गर्नु र पैसा डबल गर्ने सपना देख्नु निक्कै घातक हुन सक्छ।
आज हामी कसरी Bitcoin को डेटा विश्लेषण गर्ने र ट्रेडिगंका केहि राम्रा उपाएहरु बताउनेछौं – जसबाट तपाईहरुलाई कहिले किन्ने र बेच्ने थाहा हुन्छ।
किन-बेचको डेटा हेर्दा जति धेरै समयको डेटा लियो त्यतिनै परिपक्व भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ। यसका लागि Bitcoin को चार्ट दिन वा हप्ता वा महिनाको राख्नु पर्छ। अनि Bitcoin को मूल्यको Support र Resistance zone हेर्नु पर्छ – मूल्यको गति बढ्दो छ कि घट्दो त्यसलाई केलाउनु पर्छ। चार्टको पढ्न थुप्रै सूचकहरु छन् –
१) सूचक – EMA २१
चार्टलाई हप्ताको फ्रेममा राखेर EMA २१ हेर्ने हो भने Bitcoin को मूल्य तल झर्दा प्राय त्यै EMA २१ को लाइनमा आउछ। यदि Bitcoin को मूल्य बढेको छ भने नयाँ लगानीकर्ताहरुले Bitcoin मा पैसा हाल्दा EMA २१ तिर मूल्य कुर्दा वेस हुन्छ।
२) सूचक – RSI
मूल्य बढ्ने भनेको धेरैले किन्दा हो र घट्ने भनेको धेरैले बेच्दा हो । यो अवस्था थाहा पाउन RSI प्रयोग गर्नुपर्छ ।
३) सूचक – Volume
ट्रेडिगं volume एकदम महत्तोपूर्ण छ। कति पैसा र मात्रामा किन-बेच भएकोछ सधै हेर्नु पर्छ।
४) सूचक – Hash Ribbon
५) सूचक – Bitmex Funding and Premium Index
६) सूचक – Pi Cycle Bitcoin Top Indicator
७) सूचक – NVT
Note: This articles will be further updated with more information.